Tenisy – «Coupe Davis – Groupe III»: efatra mirahalahy hiaro an’i Madagasikara | NewsMada
Tenisy – «Coupe Davis – Groupe III»: efatra mirahalahy hiaro an’i Madagasikara
Anisan’ireo hiatrika ny fiadiana ny «Coupe Davis », taranja tenisy, vondrona fahatelo, i Madagasikara. Hiaro an’i Madagasikara ireo mpilalao efatra mirahalahy, manana tanjona hiakatra ao amin’ny vondrona faharoa.
Hotanterahina, ny 11 – 14 septambra ho avy izao, ny fifanintsanana ho an’ny vondrona fahatelo, «Coupe Davis», taranja tenisy. Fihaonana hatao ao amin’ny kianja Nairobi Club, Kenya. Hiatrika izany ny mpilalao efatra mirahalahy: Rakotondramanga Antso, kapiteny sady mpilalao. Efa manana traikefa izy, 31 taona. Tompondaka eran-tany lefitra, teo amin’ny lalaon’ny oniversite ny taona 2013.
“Hafaliana ho ahy ny nanendren’ny federasiona ahy ho kapiten’ny ekipa. Ankehitriny, mpilalao lasa mpanazatra aho. Vonona ny hampita ny fahaizako sy ny traikefako amin’ireto mpilalao entiko aho”, hoy izy.
Niantso mpilalao telo i Antso handrafitra ny ekipam-pirenena: Rakotondrahasy Jean-Jacques, mipetraka any Frantsa, indimy niatrika ny “Coupe Davis”. Eo koa Andriamasilalao Lucas, avy any Frantsa ihany koa. Intelo niatrika ity fifaninanana ity ny tenany.
Ny zandriny indrindra, Ranaivo Toky, monina atsy Maraoka, vao 14 taona monja. Voalohany ny hiatrehany ny “Coupe Davis”. Tompondaka lefitr’i Afrika 2019, teo amin’ny sokajy U16, izy.
“Ny fahaiza-manao sy ny toe-tsaina ananan’i Jean-Jacques sy i Lucas, tanjaka lehiben’ny ekipa amin’ity, ny niantsoana azy ireo. Ny vokatra tsara nataon’i Toky kosa no naharesy lahatra ahy”, araka ny nambaran’i Antso. Tanjona ny hiverenana ao amin’ny sokajy faharoa, izay efa tany amin’ny taona 2016 ny nahazoana izany farany. Manohana ny federasiona malagasin’ny tenisy ny Orange Madagascar.
Tsiahivina fa valo ny firenena hiady ity “Coupe Davis” ity ka miakatra ao amin’ny sokajy faharoa, amin’ny taona 2020, ireo firenena roa miatrika ny famaranana.